Mashandisiro ekushandisa ese nhau eSafari muIOS 14 | IPhone nhau
Tinoenderera mberi kuyedza imwe neumwe zvikumbiro zvinogamuchira nhau nekuuya kwe iOS 14, chimwe chekushandisa icho chiri kugamuchira mamwe masimba nekufamba kwenguva uye kunyanya nekuuya kweshanduro nyowani yeApple firmware. Pachiitiko ichi isu tiriwo pabasa kuitira kuti usarasikirwa nechinhu zvachose.
Tsvaga nesu zvese nhau nezveSafari muIOS 14 uye isu zvakare ticha tsanangura mashandisiro acho. Safari hapana mubvunzo imwe yeapplication mairi Apple inoisa zvakanyanya kudanana, saka iri bhurawuza rakasarudzwa nevazhinji vashandisi.
1 Chakavanzika Chirevo
2 Shanduro yakabatanidzwa
4 Mutsva wekusarudza mufananidzo
Iwe unotoziva kuti Apple ine chakakosha kufarira kuchengetedza zvakavanzika zvevashandisi vayo, ndosaka, nekuda kwezvikonzero zvine musoro, zvishandiso zvavo zvichave zvinofarirwa nevaya vanofungira yavo yega data. iOS 14 inotarisa kuedza kwayo pane aya matanho ekudzivirira yedata revashandisi vako nekushandisa matekinoroji mazhinji matsva.
Imwe yeanoshanda ayo anotibvumidza isu kuziva zvakadzama mashandisiro anopihwa kudata redu uye kunyanya anovaitira ndiye "Chakavanzika chirevo" yeSafari.
Kuti uwane uyu mushumo uri nyore kwazvo, kana tangotsvaga peji rewebhu isu tichaenda kunongedza pane iyo «AA» icon inoonekwa kuruboshwe rwekutsvaga bar. Pazasi pachaonekwa "Chakavanzika Chirevo".
Ikoko tichaona ruzivo nezvekuti Safari inodzivirira sei kuvanzika kwedu pane iyo webhusaiti, tinogona kuona kuti mangani anozivikanwa matracker Safari akavharira, pamwe nerunyorwa rweaya mapeji ewebhu ane akawanda akabatanidzwa trackers. Ichokwadi ndechekuti chinonakidza, kunyange zvakadaroChimwe chinhu chinondiudza kuti ndicho chiitiko chinowanzo kanganikwa nevashandisi.
Iyi ndeimwe yeanoshanda ayo achiri muchikamu chebeta, saka takawana kunetsekana mukushandisa kwayo. Sezvo iwe uchinyatso kuziva, Apple ikozvino yaunza nyowani Mushanduri yakanyatsobatanidzwa muiyo iPhone, zvese muhurongwa uye neayo mashandisirwo ayo ayo anonakidza uye kuti isu takave nechokwadi chekuti inoshanda chaizvo.
Mune ino kesi, zvingaite sei neimwe nzira, muturikiri akabatanidzwa zvizere muSafari, Hatife takafanirwa nekuisa zvinowedzerwa kuti tikwanise kududzira mapeji ewebhu atinoshanyira uye tiri mune mumwe mutauro.
Nekudzvanya iyo «AA» icon kuruboshwe kuruboshwe rwekutsvaga bar, basa rekushandura rewebhu webhusaiti rinoonekwa. Parizvino, kuita uku kunongotibvumidza kuti tishandure mapeji kubva kune mimwe mitauro tichiisa muChirungu kana Chirungu chikaitwa semutauro wekutanga Iko kushanda kuchabvumira kushandurira muchiSpanish munguva pfupi.
Iko kugona kuchasvikawo nekukurumidza kune macOS Big Shur uye zvakare ichave iri muPadOS 14.
Izvi zvinobva pakuona kwangu zvinonyanya kufadza zvezvinhu zvitsva zvinomuka neSafari uye zvandinovimba zvichawanikwa munguva pfupi iri kutevera mukushandisa kwechitatu-bato senge YouTube kana Teregiramu. Iyo Mufananidzo-mu-Mufananidzo system yatovepo mune mamwe madhizaina sePad kana Mac, zvisinei, zvaizeza kusvika kune iyo iPhone kunyangwe hazvo kukura mumasikisi esikirini.
Nokuda kwayo kushandiswa kuri nyore kwazvo, kweizvi:
Kwidziridza chero vhidhiyo yauri kutamba uye rova ​​iyo PiP icon kuratidza yakadzikiswa skrini uye ramba uchifamba pakati pemapurogiramu.
Ipo vhidhiyo iri kutamba, ita chiratidzo kuti udzokere kuChirungu uye ichadzikiswa otomatiki.
Ndiko kupusa kuri kushandisa iOS 14 PiP pane iyo iPhone. Kuuya kwebasa iri kunoongwa zvakanyanya, izvo zvinotibvumidza kuti tirambe tichiona mutambo wenhabvu tichipindura WhatsApp kubva kushamwari yedu.
Mutsva wekusarudza mufananidzo
Sezvo chero imwe browser, NaSafari tinogona kusarudza mapikicha kana mavhidhiyo ekuisa kune internet. Kunyangwe nekuuya kweIOS 13 takave nenhau dzakakosha, kuburikidza neFiles isu tese tinogona kurodha pasi uye kurodha magwaro, maPDF uye zvimwe zvakawanda nerusununguko rukuru runoreva izvi.
Apple yaida kupa "twist" munzira yatinobatana nayo neyekusarudza mifananidzo kuti tiite uploads, Uye ikozvino aichinjisa kuita mhando yekuwedzera yeiyo Photos app.
Nemaitiro matsva aya tichakwanisa kushandura pakati pemifananidzo ichangoburwa uye tiende takananga kubhuku riri muunganidzwa redu. Kune chikamu chayo, tichaita sarudzo yekukurumidza yemifananidzo sezvazvinoitika muApplication application uye pamwe inonakidza kwazvo, Tinogona kushandisa yekutsvaga injini inotora mukana weArtificial Intelligence yeiyo iPhone kuti ikurumidze kutsvaga chero mufananidzo.
Tichatanga neimwe yezvinonyanya kufadza uye izvo hazvingogumise chete Safari, zvinokanganisa zvimwe zvikamu zveSystem Inoshanda senge Apple's pachayo tsamba yekushandisa. Iye zvino isu tichakwanisa kuseta chero browser browser se "default", kwete chete Safari, chimwe chinhu icho kusvika parizvino chaingo goneka pa macOS. Neiyi nzira, patinovhura zvinongedzo kana marongero, ichavhurwa kuburikidza nesapplication yatakaronga seyakaomarara.
Kuti tiite shanduko iyi, isu tichaenda kuZvirongwa, tinofamba kuenda kuGeneral chikamu uye sarudza chishandiso. Mukati meanoshanda isu tinokwanisa kusarudza kana tichida kuti ive, semuenzaniso, default browser.
Haisi iyo yega yakasarudzika, ikozvino Safari futi ichabatanidzwa zvizere mu «Universal Search» iOS, ndiko kuti, isu tichakwanisa kutora mukana weiyo mhando ye "Spotlight" iyo Apple inowanika pa iPhone uye nekuwedzera kutsva kwechinyakare kana mafaera atinayo mukati medhina mudziyo, inotitungamira isu zvakananga ku akakurudzira mapeji ewebhu.
Zvichakadaro, ivo vanoramba vachishanda pane system ye «LogIn» pKune ese akazara ewebhu masevhisi, kunyangwe chokwadi chiri chekuti password yekuwana sevhisi kana Keychain yakanaka kwazvo paIOS, saka tinovimba shanduko haizove yakanyanya. Pakupedzisira, Scribble inoenderana muSafari kana isu tikashandisa iyo iPad uye penzura yakangwara, saka tinogona kunyora zvakananga mubhawa rekutsvaga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 14 » Mashandisiro ekushandisa ese nhau eSafari muIOS 14